Lithosphere, wax walboo aad ubaahantahay inaad ogaato | Saadaasha Shabakadda
Sida aan ku aragnay maqaalka ku saabsan lakabyada gudaha ee Dhulka, waxaa jira afar nidaam hoosaadyo dhulka ah: Jawiga, biosphere, hydrosphere, iyo geosphere. Geosphere dhexdiisa waxaan ka helaynaa lakabyo kala duwan oo meeraheenu ka kooban yahay. Bani'aadamku wuxuu isku dayay inuu qoto dheeraado isagoo adeegsanaya baaritaanno si uu u awood u yeesho inuu barto waxa cagteenna ka hooseeya. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku guuleysanay inaan galno dhowr kiiloomitir. Tufaaxa, waxaan kaliya jeexjeexnay maqaarkiisa khafiifka ah.
Si loo darso inta ka hartay gudaha Dhulka waa inaan isticmaalnaa habab aan toos ahayn. Sidan oo kale, waxaa suurtagal noqotay in la yimaado laba moodal oo sharraxaya sameynta lakabyada Dhulka iyadoo loo eegayo sida ay isugu jiraan maaddooyinka iyo firfircoonida soo socota. Dhinaca kale, waxaan ku leenahay qaab taagyeysan oo lakabyada dhulku ka kooban yihiin: Qolof, gogol iyo xudun. Dhinaca kale, waxaan leenahay qaab firfircoon oo lakabyadiisu yihiin Dhulku: Lithosphere, asthenosphere, mesosphere iyo endosphere.
1 Naqshad taagan
2 Qaabka firfircoon
4 Aragtida qulqulka qaaradda
5 Aragtida tectonics plate
6 Taarikada Lithospheric ee dhulka
6.1 Saxanka Eurasia
6.2 Qumbaha iyo Suxuunta Kariibiyaanka
6.3 Saxan nabadeed
6.4 Saxanka Indica
6.5 Saxanka Antarctic
6.6 Saxanka Koonfurta Ameerika
6.7 Nazca Plate
6.8 Taarikada Filibiin
6.9 Saxanka Waqooyiga Ameerika
6.10 Saxanka Afrikaanka
6.11 Saxanka Carabiga
Dib-u-fiirinta tusaalaha ma guurtada ah, waxaan ogaanay in qolofka dhulka loo qaybiyay qolof qaaradaha iyo qolof badeedka. Qolofka qolofku wuxuu xiraa waxyaabo ka kooban halabuur iyo da 'kala duwan, oo qolofta badweynta ayaa xoogaa ka siman uguna da'da yar.
Waxaan sidoo kale leenahay gogosha dhulka oo ka labis badan oo ay ku dhex jiraan qulqulka qulqulka. Ugu dambayntiina xudunta dhulka, oo ka kooban bir iyo nikkel oo lagu garto cufnaanteeda iyo heerkulkeeda sare.
Waxaan diirada saari doonaa qaabka firfircoon. Sidaan hore u soo sheegnayba, marka loo eego qaabka firfircoon lakabyada dhulku waa lithosphere, asthenosphere, mesosphere iyo endosphere. Maanta waxaan si faahfaahsan uga hadli doonnaa lithosphere.
Lithosphere-ka waxaa lagu sameeyaa waxa ay ahaan laheyd moodeelka ma guurtada ah qolofta dhulka iyo gogosha kore ee Dhulka. Qaab dhismeedkeedu waa mid adag oo dhumucdiisuna waa ilaa 100 km. Waxaa laga ogyahay adkaanteeda sida moolka dheer tan iyo markii xawaaraha mowjadaha dhul gariirku ay si isdaba joog ah u kordhaan iyadoo shaqaduna tahay qoto dheer.
In lithosphere, heerkulka iyo cadaadisku waxay gaarayaan qiimayaal u oggolaanaya dhagaxyada inay ku dhalaalaan meelaha qaarkood.
Marka loo eego nooca qolofta ay ku jirto lithosphere, waxaan u kala qaadaynaa laba nooc:
Continental lithosphere: Waa halka loo yaqaan 'lithosphere' kaas oo ay samaysmaan qolofta qaaradda iyo qaybta dibedda ee gogosha dhulku. Dhexdeeda ayaa ah qaaradaha, nidaamyada buuraha, iwm. Dhumucdiisuna waxay kaliya qiyaastii tahay 120 km waana da 'juquraafi duug ah maadaama ay jiraan dhagaxyo in ka badan 3.800 sano.
Oceanic lithosphere: Waxaa sameeya qolof badeedka iyo gogosha kore ee dhulka. Waxay ka kooban yihiin sagxadda badda waana ka khafiifsan yihiin lithosphere-ka qaaradda. Dhumucdiisuna waa 65 km. Waxay ka kooban tahay inta badan basal iyo dhexdeeda waxaa ku yaal buuro dhaadheer. Kuwani waa safaf dhaadheer oo ka hooseeya badda dhexdeeda oo dhumucdiisuna tahay 7 km oo keliya.
Lithosphere wuxuu ku tiirsan yahay asthenosphere ka kooban inta ka hartay dhulka dushiisa. Lithosphere wuxuu u qaybsan yahay lithospheric ama taarikada teknoolojiyada kala duwan oo si joogto ah u socda.
Aragtida qulqulka qaaradda
Ilaa bilowgii qarnigii 1910aad, ifafaaleyaasha dhulka sida volcanoes, dhulgariirrada iyo laalaabka ayaa ahaa xaqiiqo aan sharaxaad ka bixin. Ma jirin qaab lagu sharxo qaabka qaaradaha, sameysashada safafka iyo buuraha, iwm. Laga soo bilaabo XNUMX waxaa mahad leh khabiirka cilmiga dhulka ee Jarmalka Alfred Wegener, oo soo jeedisay Aragtida qulqulka qaaradda, waxaa suurtagal noqotay in la bixiyo sharraxaad iyo in lala xiriiri karo dhammaan fikradaha iyo fikradahaas.
Aragtida waxaa la soo saaray 1912 waxaana la aqbalay 1915. Wegener wuxuu qiyaasey in qaaradaha ay ku socdaan dhaqdhaqaaqyo ku saleysan tijaabooyin kala duwan.
Tijaabooyinka cilmiga dhulka. Waxay ku saleysnaayeen xiriirka ka dhexeeya dhismooyinka juqraafiyeed ee labada dhinac ee Badweynta Atlantik. Taasi waa, sida qaaradaha ay umuuqdaan inay iswaafajinayaan maadaama ay mar wada ahaayeen. Pangea waxaa loogu yeeri jiray qaaradda adduunka oo mar midoobi jirtay oo hoy u ahayd dhammaan noocyada dhirta iyo xayawaanka adduunka ku nool.
Qaaraduhu way iswaafaqaan. Xigasho: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contente2.htm
Caddaynta cilmiga jir ahaaneed. Tijaabooyinkan ayaa lagu lafa guray jiritaanka dhir aad u eg oo fosil iyo fauna ah oo ku nool aagag qaaradeed oo hadda ay kala go'een badaha.
Xigasho :: http://www.geologia.unam.mx:8080/igl/index.php/difusion-y-divulgacion/temas-selectos/568-la-teoria-de-la-tectonica-de-placas-y -waxaa-qaaradda-qulqulaya
Tijaabooyinka Paleoclimatic. Imtixaannadan waxay darseen meesha ay ku yaallaan dhagaxyada soo bandhigaya xaaladaha cimilada ee ka duwan meesha ay hadda ku nool yihiin.
Marka hore, qaabkan loo wajahayo qulqulka qaaradda waxaa diiday bulshada cilmiga tan iyo markii ay ka maqnayd farsamo lagu sharaxay dhaqdhaqaaqa qaaradaha. Xoogkee ayaa dhaqaajiyay qaaradaha. Wegener wuxuu isku dayay inuu sharraxo tan isagoo sheegay in qaaradaha ay u dhaqaaqaan kala duwanaanta cufnaanta iyo in qaaraduhu, iyagoo cufan yari, ay sidii rooga dhulka ugu fuulaan. Tan waxaa diiday dad badan xoog khilaaf taasi waa jirtaa.
Aragtida tectonics plate
Aragtida 'plate Tectonics' waxaa si wada jir ah ula wadaagay dhammaan xogta sanadkii 1968 bulshada cilmiga sayniska. Dhexdeeda lithosphere waa lakabka adag ee sare ee Dhulka (qolof iyo gogol dibedda ah) waxaana loo qaybiyaa jajabyo loo yaqaan taarikada in ay socdaan. Dabaqyada ayaa isu beddela cabirkooda iyo qaabkoodaba xitaa way baaba'i karaan. Qaaradaha ayaa saaran taarikadaas waana la dhaqaajiyaa qulqulka qulqulka ee gogosha dhulka. Soohdimaha taarikada ayaa ah halka ay dhaqdhaqaaqyada dhul gariirku iyo geeddi-socodka juquraafiyeed ka dhacaan. Xadka hoose ee saxanku waa kuleyl. Waa shilalka taarikada oo dhaliya laalaabka, cilladaha iyo dhulgariirrada. Si loo sharaxo dhaqdhaqaaqa taarikada, dhaqdhaqaaqyo kala duwan ayaa la soo jeediyay. Markay taarikada dhaqaaqdo, saddex nooc oo culeys ayaa ka dhici kara xadka u dhexeeya, kuwaasoo asal ahaan ka soo jeeda seddex nooc oo kala duwan oo geesaha ah.
Dhinacyada kala duwan ama xadka dhismaha: Waa aagag ay ku jiraan culeysyo kacsan oo u muuqda inay kala soocayaan taarikada. Aagga xadka dhismaha waa xeebta badda. Dabaqa bada wuxuu balaaraa inta udhaxeysa 5 ilaa 20 cm sanadkii waxaana jira qulqulka kuleylka gudaha. Dhaqdhaqaaqa dhul gariirku wuxuu ku dhacaa qoto dheer qiyaastii 70 km.
Beddelashada geesaha ama xuduudaha halaagga: Waxay kudhacaan inta udhaxeysa taarikhda midba midka kale xoog xoog leh. Saxanka khafiifka ah ee cufan kan kale hoostiisa ayuu hoos u galaa oo marada ayuu galaa. Waxaa loo yaqaannaa aagagga hoose. Taas awgeed, orogens iyo jasiiradaha jasiiradaha ayaa la sameeyay. Waxaa jira dhowr nooc oo geesaha isugeynaya iyadoo kuxiran howsha taargooyinka:
Isku dhaca inta udhaxeysa badda iyo qaaradaha: Saxanka badda ayaa ah midka hoos yimaada qaaradda. Markay taasi dhacdo, sameynta godad badweyn, dhaqdhaqaaq dhulgariir weyn, dhaqdhaqaaq kuleyl badan iyo sameysmo silsilado cusub oo orogen ah ayaa dhaca.
Isku dhaca inta udhaxeysa badweynta iyo badweynta: Markay xaaladan dhacdo, waxaa la soo saaraa xabaal-biyoodka badda iyo waxqabadka folkaanaha hoostiisa.
Isku dhaca inta udhaxeysa qaaradaha iyo qaaradaha: Tani waxay keenaysaa xidhitaanka baddii kala tagtay iyo samaynta buur weyn oo orogenic ah. Sidan ayaa loo sameeyay Himalayas.
Cidhifyada dhexdhexaadka ah ama cadaadiska xiiridda: Waa aagag uu xiriirka ka dhexeeya labada taarikada uu kudhaco culeyska xiirida sababtoo ah barakaca dhinaca dambe ee ka dhexeeya. Sidaa darteed lithosphere midkoodna lama abuurin mana burburin. Cilladaha isbeddelka ayaa la xiriira culeyska xiiridda ee taarikada ay u dhaqaaqdo jihooyinka ka soo horjeeda isla markaana soo saarto taxane ballaaran oo dhulgariir ah
Waxaa jira xoog wadis oo uu sababo kuleylka ku keydsan gudaha Dunida, tamarta kuleylka ah ee kuleylkaas keydsan waxaa loo beddelaa tamar farsamo iyadoo loo marayo qulqulka qulqulka marada. Gogosha waxay awood u leedahay inay ku socoto xawaare gaabis ah (1 cm / sanadkii). Taasi waa sababta dhaqdhaqaaqa qaaradaha aan si qadarin leh looga qiimeynin qiyaasta aadanaha.
Taarikada Lithospheric ee dhulka
Gobolka bari ee Atlantic Ridge. Waxay ka koobantahay bariga badda ee Atlantic Ridge, Yurub iyo inta badan Aasiya ilaa jasiiradaha Japan. Aaggeeda badda waxay leedahay xiriir kaladuwan oo leh saxanka Waqooyiga Ameerika, halka koonfurta ay isku dhacaan saxanka Afrikaanka (natiijada, Alps ayaa la sameeyay), iyo bariga, taarikada Baasifigga iyo Filibiin. Aaggan, dhaqdhaqaaqiisa weyn awgeed, wuxuu ka mid yahay giraanta Baasifigga dabka.
Qumbaha iyo Suxuunta Kariibiyaanka
Labadan taarikada yar ee badda ku dhex yaal waxay ku yaalaan inta u dhexeysa Waqooyiga Ameerika iyo Koonfurta Ameerika.
Waa saxan weyn oo badda ah oo xiriiriya sideed kale. Xuduudaha halaagga ah waxay ku yaalliin xudduudda u samaysan giraanta dabka Baasifigga.
Waxaa ku jira Hindiya, New Zealand, Australia, iyo qaybta u dhiganta ee badda. Isku dhacii uu la yeeshay saxanka Eurasia wuxuu soo saaray sare u kaca Himalayas.
Saxan weyn oo sameeya xuduudo kala duwan oo uu la xiriiro.
Saxanka Koonfurta Ameerika
Saxan weyn oo leh xaddidan isku-xirnaanta aaggiisa galbeedka, aadna ugu xoog badan dhul-gariir ahaan iyo volkanad ahaan
Badweynta Isku dhacii uu la yeeshay saxanka Koonfurta Ameerika wuxuu ka dhashay Andes.
Waxay ku taal badweyn iyo mid ka mid ah kuwa ugu yar.waxay ku hareeraysan tahay soohdin isku xidhan, oo la xiriirta mowjadaha hoos u dhaca, oo leh boholo waaweyn iyo jasiirado.
Saxanka Waqooyiga Ameerika
Aaggeeda galbeed waxay la xiriirtaa saxanka Baasifigga. Waxay la xiriirtaa cilladda caanka ah ee San Andrés (Kalifoorniya), cilad beddel ah oo sidoo kale loo tixgeliyo inay ka mid tahay suunka dabka.
Saxan isku dhafan. Marka ay xaddidan tahay galbeedka ballaarinta badda ayaa ka dhaceysa. Waqooyiga waxay sameysantay badda dhexe iyo buuraha Alps iyadoo ay isku dhaceen saxanka Eurasia. Dhexdeeda waxaa si tartiib tartiib ah uga furmaya khilaaf u kala qaybin doona Afrika laba qaybood.
Saxan yar oo xadka galbeed ka xiga kaas oo badweynta cusub, Badda Cas ay furayaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Laydhka
Noocyada qaar ayaa aad ugu hanjaba isbedelka cimilada